नफाल्नुस् आफ्नो पुरानो फोन, त्यसमा सुन हुन्छ ! – mero sathi tv
नफाल्नुस् आफ्नो पुरानो फोन, त्यसमा सुन हुन्छ !
On २० चैत्र २०७४, मंगलवार १६:३९
स्मार्टफोनको क्रेज लगातार बढिरहेको छ ।अहिले अवस्था यस्तोसम्म भइसकेको छ कि मानिसहरु सामान्य समस्यामै पुरानो फोन छाडेर नयाँ फोन लिन्छन् । नयाँ फोन किनेपछि हामीले पुरानो फोनलाई कतै थन्क्याएर बिर्सिन्छौं । तर के तपाइँलाई थाहा छ ? जुन स्मार्टफोनलाई तपाइँ बेकार सम्झेर थन्क्याउनुहुन्छ त्यसमा सुन हुन्छ ।
फोन बनाउन सुनको पन प्रयोग हुन्छ । असका अलावा फोन बनाउन चाँदी, तामाजस्ता अन्य धातुहरुको पनि प्रयोग हुन्छ । एक मोवाइल फोनमा ०.०१ प्रतिशत सुन, १० देखि १५ प्रतिशत चाँदी र ४० देखि ५० प्रतिशत रिसाइकल प्लाष्टिक जस्ता कुराहरु प्रयोग हुन्छन् । यसका अलावा मोवाइल फोन बनाउन कैयौं अन्य धातु पनि प्रयोग हुन्छन् । एक अनुसन्धानका अनुसार एक टन फालिएका मोवाइल फोनबाट १५० ग्राम सुन, १०० किलो तामा र तीन किलो चाँदी निकाल्न सकिन्छ ।
एक आइफोनमा ०.०३४ ग्राम सुन, ०.३४ ग्राम चाँदी, ०.०१५ ग्राम प्याडेलियम, १५ ग्राम तामा र २५ ग्राम आल्मुनियम हुन्छ । महंगा स्मार्टफोनमा १ ग्रामसम्म सुन हुन्छ । संसारमा यस्ता पुराना मोपाइल फोनको थुप्रो छ जो अब कुनै प्रयोगमा आउँदैनन् । सामान्यतया संसारमा मानिसहरु ११ महिनामा मोवाइल फोन फेर्छन् । यसरी प्रयोगमा नरहेका फोनमध्ये १० प्रतिशत फोनबाट मात्र त्यसका धातु निकालिन्छन् वा त्यसका पार्टहरु पुनः प्रयोग हुन्छन् । एक अध्ययनअनुसार १० लाख मोवाइल फोनबाट करिब १५ टन तामा, ३५० किलो चाँदी, ३४ किलो सुन र १५ किलो प्यालेडियम निकाल्न सकिन्छ ।
अन्तर्वार्तामै साम्राज्ञीले नाजिरलाई ‘आइ लभ यु’ भनेपछि.. (भिडियो)
प्रदिपको क्रेज जापानमा पनि उस्तै